Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fitokonana: Scandinavian Airlines SAS izay handà mpandeha 70,000 XNUMX+
Mpandeha maherin'ny 70,000 no mety ho tratra anio manidina, avy na mankany amin'ny seranam-piaramanidina any Scandinavia. Ity dia lahatsoratry ny media sosialin'ny CEO SAS, Rickard Gustafson. “Na eo aza ny fifampiraharahana mafy sy ny finiavana hisoroka ny fifandonana, dia nanenina izahay fa tsy nahomby. Nanapa-kevitra ny hanao fitokonana ireo sendikan'ny mpanamory fiaramanidina androany. ” Tsy voakasik'izany ny sidina ataon'ny mpiara-miasa codeshare.
Scandinavian Airlines, izay matetika fantatra amin'ny anarana hoe SAS, no mpitatitra saina any Suède, Norvezy ary Danemark, izay miaraka mamorona an'i Skandinavia tanibe. SAS dia fanafohezana ny anarana feno an'ny orinasa, Scandinavian Airlines System na Scandinavian Airlines System Denmark-Norvezy-Suède ara-dalàna.
Hoy ny fampahalalana ao amin'ny tranokala SAS:
Miala tsiny izahay raha tratry ny fitokonan'ny mpanamory fiaramanidina soedoà, norveziana ary danoà izay niteraka fahatarana sy fanafoanana ny sidina. Manao izay rehetra azonay atao izahay mba hanampiana ny rehetra.
Ny SAS dia ezahina ny hahita vahaolana haingana araka izay azo atao mba hisorohana ny fahasahiranana fanampiny ho an'ny mpandeha.
Alohan'ny handehanana any amin'ny seranam-piara-manidina, azafady mba jereo ny satan'ny sidinao. Raha te hahalala vaovao momba ny fifamoivoizana dia tsidiho azafady ny tranonkalantsika.
Manapoaka ny tanànan'i Sri Lankan ny fipoahana rehefa mihaza ireo mpampihorohoro silamo ao ambadiky ny fanapoahana baomba ny paska